प्रश्न र उत्तर: विशेषज्ञले तपाईंको इनग्रोर हेयर-टेक्निकल जानकारी ह्यान्डल गर्ने उत्तम तरिकाको वर्णन गर्दछ - शेन्ज़ेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट विनिर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड।
प्रश्न र उत्तर: विज्ञले तपाईंको ईन्ग्रोन कपाल ह्यान्डल गर्ने उत्तम तरिका वर्णन गर्दछ
समय: 2019-12-19 हिट्स: 84
नरम, नरम छालाको आशामा तपाईं दाढी गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईलाई थाहा छ, सानो रातो बम्पहरू देखा पर्दछ, तपाईको उत्तम दुलहालाई खत्तम पार्दै। तपाईंको अनुहार, खुट्टाहरू, बिकिनी लाइन वा अन्डरआर्म्समा, ईr्ग्रउन कपालहरू कहिलेकाँही कपाल हटाउने कष्टदायी साइड इफेक्ट हुन्।
तर ingrown कपाल अपरिहार्य छैन।
Dortors केहि मुख्य प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ र कसरी रोकिन्छ, पहिचान गर्न र इनग्रोन कपालको प्रबन्ध गर्नका लागि सुझावहरू प्रदान गर्दछ, जहाँ जहाँ पनि देखा पर्दछ।
प्रश्न: के हुन्छ जब तपाइँ इनग्रोन कपाल पाउनुहुन्छ?
A: जब तपाईं आफ्नो शरीरबाट कपाल हटाउनुहुन्छ यो कहिलेकाँही टेढो वा पछि छालामा बढ्छ। कपाल कपाल कपाल भित्र encapsulated हुन्छ र एक हल्का संक्रमण पैदा गर्दछ। यसले क्षेत्रमा रातो बम्प वा हल्का सूजन सिर्जना गर्दछ। कहिलेकाँहि यो "टाउको" कोपले भरिएको एक्ने जस्तो देखिन्छ।
इनग्रोन कपाल बिकिनी लाइन वा अन्डररम क्षेत्रमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरू अन्य बम्पहरू भन्दा फरक छन् किनकि तपाईं सामान्यतया बम्प भित्रको कालो कपाल देख्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: के कारण ईr्ग्रउन कपाल हुन्छ?
A: त्यहाँ धेरै उत्पादनहरू र अभ्यासहरू छन् जसले कहिलेकाँही ईन्ट्रोउन कपालको साथ समस्याहरू स्पार्क गर्दछ:
उत्पादनहरू जुन छेड्छ पोर्स (डिओडोरन्ट वा साबुन वा कन्डिसन स्ट्रिपहरूको साथ ब्लेड ब्लेडहरू)
तुरुन्तै नुहाउने बिना पसिना, विशेष गरी एक दाह्री पछि
Waxing, जो कि जलन पैदा गर्दछ र कहिले काहिं दाह्री पैदा हुन्छ जब कपाल फर्कन्छ
लगातार शेविving (पुरुषहरूको अनुहारमा जस्तै)
सेभ गर्ने वा ट्वीज गर्ने कपालहरू (प्राय: अनुहारमा) कालो र कोर्स हुन्छन्
Q: के ingrown कपाल स्थायी छाला समस्या पैदा गर्दछ?
उत्तर: उम्रेको कपालले प्राय: कुनै पनि भविष्यको समस्याहरू उत्पन्न गर्दैन। यद्यपि, केहि व्यक्तिले हाइपरपिग्मेन्टेशन, वा छालाको अँध्यारो विकास गर्दछ। तपाईं यसलाई रासायनिक पिलहरू वा अन्य छाला-हेरचाह गर्ने रिजेमको साथ उपचार गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग गाढा रंग छ भने, तपाईंलाई दाग लाग्ने समस्या छ वा हल्का छाला भएको भन्दा इन्ट्र्रोन कपालबाट पछाडि छोडियो।
प्रश्न: समस्याबाट बच्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
A. ईन्ट्रोउन कपाल रोक्नको लागि कुनै ग्यारेन्टी तरीका छैन। तर केहि चीजहरू छन् तपाईले यसलाई बेमा राख्नको सम्भावना बढाउन तपाईंले गर्न सक्नुहुने:
एकल ब्लेडको साथ सफा, सुक्खा छालामा दाढी गर्नुहोस् वा dermablading (मिनीको बोक्रा जसले तपाईंको छालाको माथिल्लो तहलाई एक्सफोलिएट गर्दछ) कोशिस गर्नुहोस्।
सेभ गर्नु अघि तिनीहरूलाई खोल्न स्नानमा कपालका फोलिकहरू राख्नुहोस्।
यसको सट्टामा कपालको अन्नको साथ दाढी गर्नुहोस्।
एक्सफोलिएट र तेल कम गर्नुहोस् सासारिक एसिड वा बीटा हाइड्रोक्सिलहरू जस्तै उत्पादनहरूमा pores खाली गर्न।
Q: तपाईंले इनग्रोन कपाल तान्न प्रयास गर्नु पर्छ?
A: लोकप्रिय विश्वासको विपरित, तपाइँ ingrown कपाल बाहिर झुकाउनु हुँदैन। यदि पूस छ भने, त्यहाँ हल्का संक्रमण छ। यसैले क्षेत्र सफा र सुक्खा राख्नुहोस् र दाह्री नलगाउनुहोस् जबसम्म यो सफा हुँदैन।
यदि, तथापि, तपाईं सँगै कपाल छ जो बारम्बार दोहोरिन्छ, हाइपरपिग्मेन्टेशन (विशेष गरी अनुहारमा) सिर्जना गर्दछ, वा गहिरो वा बिग्रेको गन्ध जस्तो महसुस गर्दछ भने, उपचार विकल्पहरूको लागि स्किनकेयर पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
अघिल्लो: लेजर कपाल हटाउने प्रश्नहरूको बारेमा केहि
अर्को: गर्मी कपाल हटाउने सल्लाह